မထင်မှတ်ဘဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာနှင့်ပုံစံတူ ဂြိုလ်အသစ်တွေ အကြောင်း – Barnyar Barnyar
မထင်မှတ်ဘဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာနှင့်ပုံစံတူ ဂြိုလ်အသစ်တွေ အကြောင်း
ပရိသတျကွီးကို အခုတဈခေါကျမှာတော့ မကွာသေးခငျကမှ ရှာဖှတှေရှေိ့ထားသော ကမ်ဘာနှငျ့ပုံစံတူ တဲ့ ဂွိုလျအသဈတှေ အကွောငျးကို ပွောပွပေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ အာကာသစကွာဝဠာထဲမှာ မရမေတှကျနိုငျတဲ့ ဂွိုဟျပေါငျးမြားစှာရှိတာ မှနျပမေယျ့လညျး ကမ်ဘာနဲ့ပုံစံတူတဲ့ ဂွိုဟျတှကေို ရှာတှဖေို့အတှကျကတြော့ ပညာရှငျတှဟော လကျရှိ နညျးပညာတှနေဲ့ ခကျခကျခဲခဲ ရှာဖှကွေရတာပါ ။ဒါ့ကွောငျ့ အခုအခြိနျအထိ ကမ်ဘာနဲ့ တူတဲ့ ဂွိုဟျ ဘယျနှဈလုံးကို ပညာရှငျတှေ ရှာတှခေဲ့ကွပွီလဲဆိုတာကိုတော့ အောကျကပုံလေးတှေ တဈပုံခငျြးစီကိုသာ ကွညျ့လိုကျပါဦးနျော …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Trappist-1
အခု ပထမဦးဆုံးပွောပွပေးခငျြတာကတော့ Trappist-1 အဖှဲ့အစညျးထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ ဂွိုဟျတှေ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ သိပ်ပံပညာရှငျတှဟော ကမ်ဘာမွနေဲ့ အလငျးနှဈပေါငျး ( ၄၀ ) အကှာမှာရှိတဲ့ Trappist-1 ကွယျ ကို ( ၁၉၉၉ ) ခုနှဈ က စတငျ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတယျ ။ ( ၂၀၀၆ ) ခုနှဈ မှာတော့ Trappist-1 ကွယျကို လှညျ့ပတျနတေဲ့ ဂွိုဟျ ( ၃ ) လုံးကို ထပျမံ တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ ။ နောကျပိုငျး ( ၂၀၀၈ ) ခုနှဈ အရောကျမှာတော့ ထို ကွယျကို လှညျ့ပတျနတေဲ့ နောကျထပျ ဂွိုဟျ ( ၄ ) လုံး ရှိသေးကွောငျး ဖျောထုတျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့ကွောငျ့မို့ Trappist-1 ကွယျကို လှညျ့ပတျနတေဲ့ ဂွိုဟျတှဟော ( ၇ ) လုံး ရှိတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ ။ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ အခကျြကတော့ ဒီ ဂွိုဟျ ( ၇ ) လုံးဟာ ကမ်ဘာမွကွေီး အရှယျအစား နဲ့ တူညီကာ ကြောကျဆောငျတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာပါ ။ ဒီအထဲကမှ ဂွိုဟျ ( ၃ ) လုံးဟာဆိုရငျ လူသားတှေ နထေိုငျနိုငျဖို့ အဆငျပွနေိုငျတယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဂွိုဟျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ မလုံလောကျသေးတဲ့ အတှကျကွောငျ့ လူသားတှေ နထေိုငျနိုငျတာကို အတညျပွုဖို့အတှကျ စောလှနျးနပေါသေးတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Kepler-22b
နောကျထပျ ပွောပွပေးမယျ့ ဂွိုဟျကတော့ ကမ်ဘာမွေ နဲ့ အလငျးနှဈ ( ၆၀၀ ) အကှာမှာ တညျရှိတဲ့ Kepler-22b အမညျရှိ ဂွိုဟျ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီ ဂွိုဟျကို ( ၂၀၁၁ ) ခုနှဈ တုနျးက ရှာတှခေဲ့တာဖွဈပွီး NASA အဖှဲ့အစညျး ကတော့ “ Super Earth “ လို့ သတျမှတျပေးထားပါတယျ ။ လလေ့ာမှုတှအေရ Kepler-22b ဂွိုဟျဟာ သူ့ရဲ့ နအေဖှဲ့အစညျးထဲမှာတော့ လူသားတှေ နထေိုငျနိုငျတဲ့ ပတျလမျးကွောငျး အကှာအဝေးမှာရှိပွီး ဂွိုဟျရဲ့ မကျြနှာပွငျ အပူခြိနျဟာ ( ၁၅.၅ ) ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျ ရှိပါတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
သုတသေီ တဈခြို့ ကတော့ Kepler-22b ဂွိုဟျဟာ ကမ်ဘာလိုမြိုး သမုဒ်ဒရာ ကမ်ဘာ နောကျတဈခု ဖွဈနိုငျပွီး ကမ်ဘာဂွိုဟျထကျလညျး အရှယျအစား ပိုကွီးနိုငျတယျလို့ ယုံကွညျထားကွပါတယျ ။ နောကျပွီး Kepler-22b ဂွိုဟျဟာ ကမ်ဘာဂွိုဟျထကျ ( ၂.၄ ) ဆ ပိုကွီးပွီး သူ့ရဲ့ ကွယျကို တဈပတျအပွညျ့ ပတျဖို့အတှကျ ရကျပေါငျး ( ၂၈၉.၉ ) ရကျ ကွာတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ထို ဂွိုဟျဟာ အတျောလေးကို စောငျးနတေဲ့ အနအေထားမှာရှိတာကွောငျ့ တောငျဝငျရိုးစှနျး နဲ့ မွောကျဝငျရိုးစှနျးတို့ဟာ နရေောငျခွညျ နဲ့ ညအမှောငျထုကို (၆) လလောကျနမှေ တဈခါ တှရေ့နိုငျပါတယျတဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Kepler-69c
ကမ်ဘာဂွိုဟျနဲ့ ဆငျတူတဲ့ နောကျထပျ ဂွိုဟျတဈလုံးကတော့ Kepler-69c လို့ အမညျရှိတဲ့ ဂွိုဟျပဲ ဖွဈပါတယျ ။ Kepler-69c ဂွိုဟျဟာ ကမ်ဘာမွနေဲ့ အလငျးနှဈပေါငျး ( ၂၇၀၀ ) ခနျ့ အကှာအဝေးမှာ တညျရှိပွီး အရှယျအစားကတော့ ကမ်ဘာဂွိုဟျထကျ ( ၇၀ ) ရာခိုငျနှုနျး ပိုပွီး ကွီးပါတယျတဲ့ ။ ဒါပမေယျ့ ကမ်ဘာဂွိုဟျ အဖှဲ့အစညျးထဲမှာရှိတဲ့ ယူရေးနပျဈ ဂွိုဟျ နဲ့ နတျပကြှနျး ဂွိုဟျထကျတော့ သေးငယျပါတယျတဲ့ ။ နောကျပွီး Kepler-69c ဂွိုဟျဟာ သူ့ရဲ့ ကွယျကို တဈပတျပွညျ့အောငျ ပတျဖို့အတှကျ ရကျပေါငျး ( ၂၄၂ ) ရကျ ကွာမွငျ့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ shwekhitonlinetv.com
ပညာရှငျတှေ ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ Kepler-69c ဂွိုဟျဟာ သူ့ရဲ့ ပငျမ ကွယျ နဲ့ မနီးလှနျး ၊ မဝေးလှနျး တဲ့ အကှာအဝေးမှာ ရှိနတောကွောငျ့ နထေိုငျနိုငျဖို့ သငျ့တျောတဲ့ ဂွိုဟျဖွဈတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ဂွိုဟျရဲ့ မကျြနှာပွငျ အပူခြိနျဟာ ( ၅၂ ) ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျ ဒါမှမဟုတျ ဒီ့ထကျ ပိုပွီး ပူနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ ။ လကျရှိမှာတော့ Kepler-69c ဂွိုဟျရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို တိတိကကြ မသိရသေးတာကွောငျ့ ပညာရှငျတှေ စူးစမျးလလေ့ာမှုတှေ ဆကျလကျ လုပျနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ TOI-1231b
နာဆာ ရဲ့ Jet Propulsion Laboratory နဲ့ နယူး မက်ကဆီကို တက်ကသိုလျတို့ဟာ ကမ်ဘာဂွိုဟျထကျ ( ၃ ) ဆ ပိုကွီးတဲ့ ဂွိုဟျတဈလုံးကို ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒီ ဂွိုဟျကိုတော့ TOI-1231b လို့ နာမညျပေးထားပွီး ကမ်ဘာမွရေဲ့ အလငျးနှဈပေါငျး ( ၉၀ ) အကှာအဝေးမှာ ရှိတယျလို့ နာဆာ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ပွောကွားထားပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ TOI-1231b ဂွိုဟျဟာ အနီရောငျ ကွယျပု တဈလုံးကို လှညျ့ပတျနတေယျဆိုတာကိုပါ နာဆာ ပညာရှငျတှကေ ရှာတှခေဲ့ကွပါသေးတယျ ။ နောကျပွီး ထို ဂွိုဟျဟာ ကမ်ဘာမွရေဲ့ အပူခြိနျနဲ့ အတျောလေးကို နီးနီးစပျစပျ တူညီပွီး ( ၂၄ ) ထဲနဲ့ သူ့ရဲ့ ဂွိုဟျပတျလမျးကို တဈပတျပွညျ့အောငျ ပတျနိုငျပါသေးတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
သိပ်ပံပညာရှငျတှေ ရဲ့ အဆိုအရ TOI-1231b ဂွိုဟျရဲ့ လထေုဟာ ခနျ့မှနျးခွေ အားဖွငျ့ ( ၅၆.၈၅ ) ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ ရှိနိုငျပါတယျတဲ့ ။ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာကတော့ ထိုဂွိုဟျရဲ့ လထေုထဲမှာ မွငျ့မားတဲ့ တိမျမြား ရှိနိုငျတဲ့အပွငျ ရေ ပါ ရှိနိုငျတဲ့ အထောကျအထားတှကေို လညျး တှရေ့ပါတယျ ။ Nasa JPL ရဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ Jennifer Burt ကတော့ “အရငျက ရှာတှခေဲ့တဲ့ အပူခြိနျ ထောငျခြီပွီး ပူပွငျး လောငျကြှမျးနတေဲ့ ဂွိုဟျတှေ နဲ့ ယှဉျရငျတော့ TOI-1231b ဂွိုဟျ ဟာ အတျောလေး အေးမွတဲ့ ဂွိုဟျ အနအေထားမှာ ရှိတယျလို့ “ ပွောကွားထားခဲ့ပါတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Kepler-452b
အခု နောကျဆုံးပွောပွပေးမယျ့ ဂွိုဟျကတော့ Kepler-452b လို့ အမညျရတဲ့ ဂွိုဟျပဲ ဖွဈပါတယျ ။ နာဆာ အဖှဲ့အစညျးကတော့ ထိုဂွိုဟျဟာ ကမ်ဘာဂွိုဟျနဲ့ အတျောလေးကိုမှ ဆငျတူ တဲ့ ဂွိုဟျတှထေဲက တဈလုံး ဖွဈတယျလို့ ပွောကွားထားတာပါ ။ ဒါ့အပွငျ Kepler-452b ဂွိုဟျ က ပတျ နတေဲ့ ကွယျဟာ နေ နဲ့ အတျောလေးကို ဆငျတူပွီး Kepler-452b ဂွိုဟျ ဟာလညျး ထိုကွယျ နဲ့ မနီးလှနျး ၊ မဝေးလှနျးတဲ့ အကှာအဝေးမှာ တညျရှိနတောကွောငျ့ နထေိုငျနိုငျတယျ ဂွိုဟျတဈလုံး အဖွဈ သတျမှတျခံထား ရပါတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
အကှာအဝေး အနနေဲ့ကတော့ Kepler-452b ဂွိုဟျဟာ ကမ်ဘာမွကေနေ အလငျးနှဈပေါငျး ( ၁၄၀၀ ) အကှာမှာ တညျရှိနတောကွောငျ့ တျောတျောလေး ဝေးလံတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ နောကျပွီး Kepler-452b ဂွိုဟျရဲ့ အရှယျအစားဟာ ကမ်ဘာဂွိုဟျထကျ ( ၁.၆ ) ဆ ပိုပွီးတော့ ကွီးမားပါတယျတဲ့ ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီ ဂွိုဟျရဲ့ အတှငျးပိုငျးမှာတော့ ကြောကျဆောငျ ၊ ကြောကျခဲတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားနိုငျခွမြေားတာကွောငျ့ နထေိုငျဖို့ သတျမှတျရနျ စောလှနျးသေးတယျလို့ Kepler-452b ဂွိုဟျကို ရှာဖှတှေ့ရှေိ့ခဲ့သူတှကေ ပွောကွားထားပါတယျ ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖျောပွပေးထားတာကတော့ မထငျမှတျဘဲ ရှာဖှတှေရှေိ့ထားတဲ့ ကမ်ဘာနှငျ့ပုံစံတူ ဂွိုလျအသဈတှေ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ နောကျပိုငျးတှမှောလညျး အခုလိုမြိုး စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေို ရှာဖှတေငျဆကျပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောငျ့မြှျောဖတျရှုပေးကွပါဦးနျော …. shwekhitonlinetv.com
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ မကြာသေးခင်ကမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော ကမ္ဘာနှင့်ပုံစံတူ တဲ့ ဂြိုလ်အသစ်တွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အာကာသစကြာဝဠာထဲမှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်ပေါင်းများစွာရှိတာ မှန်ပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာနဲ့ပုံစံတူတဲ့ ဂြိုဟ်တွေကို ရှာတွေ့ဖို့အတွက်ကျတော့ ပညာရှင်တွေဟာ လက်ရှိ နည်းပညာတွေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေကြရတာပါ ။ဒါ့ကြောင့် အခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာနဲ့ တူတဲ့ ဂြိုဟ် ဘယ်နှစ်လုံးကို ပညာရှင်တွေ ရှာတွေ့ခဲ့ကြပြီလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
အခု ပထမဦးဆုံးပြောပြပေးချင်တာကတော့ Trappist-1 အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဂြိုဟ်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာမြေနဲ့ အလင်းနှစ်ပေါင်း ( ၄၀ ) အကွာမှာရှိတဲ့ Trappist-1 ကြယ် ကို ( ၁၉၉၉ ) ခုနှစ် က စတင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ( ၂၀၀၆ ) ခုနှစ် မှာတော့ Trappist-1 ကြယ်ကို လှည့်ပတ်နေတဲ့ ဂြိုဟ် ( ၃ ) လုံးကို ထပ်မံ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ နောက်ပိုင်း ( ၂၀၀၈ ) ခုနှစ် အရောက်မှာတော့ ထို ကြယ်ကို လှည့်ပတ်နေတဲ့ နောက်ထပ် ဂြိုဟ် ( ၄ ) လုံး ရှိသေးကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့ကြောင့်မို့ Trappist-1 ကြယ်ကို လှည့်ပတ်နေတဲ့ ဂြိုဟ်တွေဟာ ( ၇ ) လုံး ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ဒီ ဂြိုဟ် ( ၇ ) လုံးဟာ ကမ္ဘာမြေကြီး အရွယ်အစား နဲ့ တူညီကာ ကျောက်ဆောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ ။ ဒီအထဲကမှ ဂြိုဟ် ( ၃ ) လုံးဟာဆိုရင် လူသားတွေ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီဂြိုဟ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မလုံလောက်သေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် လူသားတွေ နေထိုင်နိုင်တာကို အတည်ပြုဖို့အတွက် စောလွန်းနေပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမယ့် ဂြိုဟ်ကတော့ ကမ္ဘာမြေ နဲ့ အလင်းနှစ် ( ၆၀၀ ) အကွာမှာ တည်ရှိတဲ့ Kepler-22b အမည်ရှိ ဂြိုဟ် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ ဂြိုဟ်ကို ( ၂၀၁၁ ) ခုနှစ် တုန်းက ရှာတွေခဲ့တာဖြစ်ပြီး NASA အဖွဲ့အစည်း ကတော့ “ Super Earth “ လို့ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ် ။ လေ့လာမှုတွေအရ Kepler-22b ဂြိုဟ်ဟာ သူ့ရဲ့ နေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာတော့ လူသားတွေ နေထိုင်နိုင်တဲ့ ပတ်လမ်းကြောင်း အကွာအဝေးမှာရှိပြီး ဂြိုဟ်ရဲ့ မျက်နှာပြင် အပူချိန်ဟာ ( ၁၅.၅ ) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ရှိပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
သုတေသီ တစ်ချို့ ကတော့ Kepler-22b ဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာလိုမျိုး သမုဒ္ဒရာ ကမ္ဘာ နောက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက်လည်း အရွယ်အစား ပိုကြီးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ် ။ နောက်ပြီး Kepler-22b ဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ( ၂.၄ ) ဆ ပိုကြီးပြီး သူ့ရဲ့ ကြယ်ကို တစ်ပတ်အပြည့် ပတ်ဖို့အတွက် ရက်ပေါင်း ( ၂၈၉.၉ ) ရက် ကြာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ထို ဂြိုဟ်ဟာ အတော်လေးကို စောင်းနေတဲ့ အနေအထားမှာရှိတာကြောင့် တောင်ဝင်ရိုးစွန်း နဲ့ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတို့ဟာ နေရောင်ခြည် နဲ့ ညအမှောင်ထုကို (၆) လလောက်နေမှ တစ်ခါ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
ကမ္ဘာဂြိုဟ်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ နောက်ထပ် ဂြိုဟ်တစ်လုံးကတော့ Kepler-69c လို့ အမည်ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Kepler-69c ဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာမြေနဲ့ အလင်းနှစ်ပေါင်း ( ၂၇၀၀ ) ခန့် အကွာအဝေးမှာ တည်ရှိပြီး အရွယ်အစားကတော့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ( ၇၀ ) ရာခိုင်နှုန်း ပိုပြီး ကြီးပါတယ်တဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာဂြိုဟ် အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့ ယူရေးနပ်စ် ဂြိုဟ် နဲ့ နတ်ပကျွန်း ဂြိုဟ်ထက်တော့ သေးငယ်ပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ပြီး Kepler-69c ဂြိုဟ်ဟာ သူ့ရဲ့ ကြယ်ကို တစ်ပတ်ပြည့်အောင် ပတ်ဖို့အတွက် ရက်ပေါင်း ( ၂၄၂ ) ရက် ကြာမြင့်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ပညာရှင်တွေ ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ Kepler-69c ဂြိုဟ်ဟာ သူ့ရဲ့ ပင်မ ကြယ် နဲ့ မနီးလွန်း ၊ မဝေးလွန်း တဲ့ အကွာအဝေးမှာ ရှိနေတာကြောင့် နေထိုင်နိုင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဂြိုဟ်ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဂြိုဟ်ရဲ့ မျက်နှာပြင် အပူချိန်ဟာ ( ၅၂ ) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ဒါမှမဟုတ် ဒီ့ထက် ပိုပြီး ပူနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ Kepler-69c ဂြိုဟ်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို တိတိကျကျ မသိရသေးတာကြောင့် ပညာရှင်တွေ စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေ ဆက်လက် လုပ်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နာဆာ ရဲ့ Jet Propulsion Laboratory နဲ့ နယူး မက္ကဆီကို တက္ကသိုလ်တို့ဟာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ( ၃ ) ဆ ပိုကြီးတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီ ဂြိုဟ်ကိုတော့ TOI-1231b လို့ နာမည်ပေးထားပြီး ကမ္ဘာမြေရဲ့ အလင်းနှစ်ပေါင်း ( ၉၀ ) အကွာအဝေးမှာ ရှိတယ်လို့ နာဆာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောကြားထားပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် TOI-1231b ဂြိုဟ်ဟာ အနီရောင် ကြယ်ပု တစ်လုံးကို လှည့်ပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါ နာဆာ ပညာရှင်တွေက ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါသေးတယ် ။ နောက်ပြီး ထို ဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာမြေရဲ့ အပူချိန်နဲ့ အတော်လေးကို နီးနီးစပ်စပ် တူညီပြီး ( ၂၄ ) ထဲနဲ့ သူ့ရဲ့ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကို တစ်ပတ်ပြည့်အောင် ပတ်နိုင်ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရဲ့ အဆိုအရ TOI-1231b ဂြိုဟ်ရဲ့ လေထုဟာ ခန့်မှန်းခြေ အားဖြင့် ( ၅၆.၈၅ ) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ ထိုဂြိုဟ်ရဲ့ လေထုထဲမှာ မြင့်မားတဲ့ တိမ်များ ရှိနိုင်တဲ့အပြင် ရေ ပါ ရှိနိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေကို လည်း တွေ့ရပါတယ် ။ Nasa JPL ရဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jennifer Burt ကတော့ “အရင်က ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အပူချိန် ထောင်ချီပြီး ပူပြင်း လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ဂြိုဟ်တွေ နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ TOI-1231b ဂြိုဟ် ဟာ အတော်လေး အေးမြတဲ့ ဂြိုဟ် အနေအထားမှာ ရှိတယ်လို့ “ ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခု နောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့် ဂြိုဟ်ကတော့ Kepler-452b လို့ အမည်ရတဲ့ ဂြိုဟ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နာဆာ အဖွဲ့အစည်းကတော့ ထိုဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်နဲ့ အတော်လေးကိုမှ ဆင်တူ တဲ့ ဂြိုဟ်တွေထဲက တစ်လုံး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားထားတာပါ ။ ဒါ့အပြင် Kepler-452b ဂြိုဟ် က ပတ် နေတဲ့ ကြယ်ဟာ နေ နဲ့ အတော်လေးကို ဆင်တူပြီး Kepler-452b ဂြိုဟ် ဟာလည်း ထိုကြယ် နဲ့ မနီးလွန်း ၊ မဝေးလွန်းတဲ့ အကွာအဝေးမှာ တည်ရှိနေတာကြောင့် နေထိုင်နိုင်တယ် ဂြိုဟ်တစ်လုံး အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထား ရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အကွာအဝေး အနေနဲ့ကတော့ Kepler-452b ဂြိုဟ်ဟာ ကမ္ဘာမြေကနေ အလင်းနှစ်ပေါင်း ( ၁၄၀၀ ) အကွာမှာ တည်ရှိနေတာကြောင့် တော်တော်လေး ဝေးလံတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး Kepler-452b ဂြိုဟ်ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ထက် ( ၁.၆ ) ဆ ပိုပြီးတော့ ကြီးမားပါတယ်တဲ့ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ ဂြိုဟ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာတော့ ကျောက်ဆောင် ၊ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခြေများတာကြောင့် နေထိုင်ဖို့ သတ်မှတ်ရန် စောလွန်းသေးတယ်လို့ Kepler-452b ဂြိုဟ်ကို ရှာဖွေ့တွေ့ရှိခဲ့သူတွေက ပြောကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ မထင်မှတ်ဘဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာနှင့်ပုံစံတူ ဂြိုလ်အသစ်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
စွပ်စွဲချက်တစ်ခုကြောင့် အမှိုက်သိမ်းသမားအဖြစ်သို့ ရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ အဘိုးတစ်ဦး ..